minthantzaww: ဘ၀ရဲ့ ဘယ်အရာကိုမဆို ပြောင်းလဲဖို့ မေးခွန်း(၃)ခု
သင့်ရဲ့ အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲပါသလဲ။ ဒီမေးခွန်းကို ကျနော့်ကို မကြာခဏ မေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဘယ်အခြေအနေအတွက်မဆိုပေါ့။ အလုပ်အကိုင်လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ အချစ်ရေးလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် အိမ်၊ မိသားစုအရေး၊ ငွေရေးကြေးရေး၊ ဘယ်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့၊ သင်ဟာ ဒီရိုးရှင်းတဲ့ မေးခွန်း(၃)ခုကို သင့်ကိုယ်သင် မေးရပါလိမ့်မယ်။
ငါ့ရဲ့ အခုလက်ရှိအခြေအနေက ဘာလဲ? _ သင်ဟာ သင့်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကို အပြည့်အ၀နားလည်သိရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ ပရိသတ်တွေက ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့မှာ ပြဿနာတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုတာကို သူတို့လက်မခံသေးသ၍ သူတို့မှာ ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူးတဲ့။ ဥပမာပေါ့- အရက်စွဲနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ကိုယ်သူ အရက်စွဲနေတယ်ဆိုတာ မသိသေးသ၍ သူဟာ အရက်စွဲသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သူ့ကိုယ်သူ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေဟာ မှားယွင်းနေတယ်ဆိုရင် အဲဒီလိုမှားယွင်းနေတယ်ဆိုတာကို လက်ခံဖို့အတွက် အခြေအနေမှန်ကို အပြည့်အ၀ သိဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကိုတော့ လူအများစု သိကြတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ဟာ “ ငါ ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲ” ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ မမေးကြပါဘူး။
သင့်ကိုယ်သင် မေးဖို့လိုတဲ့ နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကတာ့ -
ငါ ဘယ်ကို သွားချင်တာလဲ ? _ သင့်ဘ၀ရဲ့ ဘယ်အရာကိုမဆို ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဆိုရင် သင်ဟာ ဘ၀မှာ ဘယ်ကို သွားချင်တယ်ဆိုတာကို သိဖို့လိုပါတယ်။ သင်ဟာ တက္ကစီတစ်စီးပေါ်ကို တက်ထိုင်ပြီး ဒရိုင်ဘာကို ဒီလိုပြောမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
သင်- “ ကျနော် တစ်နေရာရာကို သွားချင်လို့ပါ ”
ဒရိုင်ဘာ- “ ဘယ်ကိုသွားချင်တာပါလဲ”
သင် – “ မသိဘူး။ အဲဒီကို ခေါ်သွားပေးပါ ”
ဒရိုင်ဘာက ဖုန်းခေါ်လိုက်ရင်း- “ ဟလို- ကျနော့်ကားပေါ်မှာ စိတ်ဝေဒနာသည်တစ်ယောက် ရောက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ ”
ဘ၀မှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ သင်ဟာ နေရာတစ်ခုကို မရောက်ခင်မှာ သင် ဘယ်ကိုသွားချင်တယ်ဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးလေးပတ်လောက်က အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ကျနော့်ကို ပြောပါတယ်။ သူက လက်ရှိအလုပ်ကို စိတ်ကုန် ငြီးငွေ့နေပြီး အလုပ်သစ်တစ်ခု လိုချင်နေပါတယ်တဲ့။ အဲဒီတော့ ကျနော်က ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးကို လိုချင်တာပါလဲလို့ မေးလိုက်ပါတယ်။ သူက အခုလုပ်နေတဲ့ အလုပ်မျိုးကိုပဲ လိုချင်ပါတယ်တဲ့။ အဲဒါ ဘယ်နေရာမှာများ ယုတ္တိရှိပါသလဲ။ လူအများစုဟာ ငြီးငွေ့စရာကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ အလုပ်ကို သူတို့ရဲ့ ဘ၀တစ်ယောက်လုံး လုပ်ကိုင်သွားလိုကြတယ်။ နည်းနည်းစွန့်စားရတာကြိုက်တဲ့သူတစ်ချို့သာ ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခုကို ပြောင်းကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့လည်း အရင်အလုပ်မျိုးကိုပဲ လုပ်ကြတာပါပဲ။ သင် ပျော်ရွှင်နေသရွှေ့တော့ အဲဒါက မမှားပါဘူး။ သင် မပျော်ရွှင်ဘူးဆိုရင်တော့ ပြောင်းလဲဖို့အစီအစဉ်တွေမချခင်မှာ သင်ဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာ အရင် ဆုံးဖြတ်ပါ။
သင့်ကိုယ်သင် မေးရမယ့် နောက်ဆုံးမေးခွန်းကတော့ -
အဲဒီကိုရောက်ဖို့ ငါ ဘယ်လိုသွားမလဲ? _ ရိုးရှင်းလှတဲ့ မေးခွန်းလေးပါပဲ။ လက်တွေ့မှာတော့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင့်အတွက်တော့ ပိုပြီးလွယ်ကူအောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။
သင် အစီအစဉ်တွေဆွဲတဲ့အခါ ဘယ်လို၊ ဘယ်နေရာ၊ ဘာကြောင့်၊ ဘယ်ဟာ စတာတွေနဲ့ သင့်ကိုယ်သင် မတွန့်ဆုတ်မိစေပါနဲ့။ အခုချက်ချင်း လုပ်ကိုင်ပါ။ သင် ပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုတာ သင့်ကိုယ်သင်သိရင်၊ အစပြုဖို့အတွက် ဘယ်အရာကို ပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတာကို သိရင်၊ ချက်ချင်း လုပ်ကိုင်ပါ။ ပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းပေါ် စတင်လျှောက်လှမ်းနိုင်မယ့် ဘယ်အရာကိုမဆို လုပ်ပါ။
ဥပမာ- သင်ဟာ အလုပ်သစ်တစ်ခု လိုချင်တယ်။ ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလိုချင်တယ်ဆိုတာလည်း သင့်ကိုယ်သင် သိတယ်။ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင့်မှာ အတွေ့အကြုံမရှိဘူး။ ဒါဆို ဘာလုပ်မလဲ? အဲဒီအလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို လေ့လာပါ။ ဒါဟာ ပထမဆုံးခြေတစ်လှမ်းပါပဲ။ သင်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်မျိုးမှာ အပျော်တမ်း ၀င်လုပ်ကြည့်ပါ။ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် CV တွေကို သင်အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေဆီ ပို့ပါ။ ပြောင်းလဲမှုအတွက် ပထမခြေလှမ်းဖြစ်စေမယ့် ဘယ်အရာကိုမဆို လုပ်ပါ။
Ref:3questions to change your anything in your life by Stevenaitchisonhttp://yourlifesuccess.blog.com/2011/07/22/3-questions-to-change-your-anything-in-your-life/
Posted by minthantzaww at 05:33